Apple dia manavao ny firmware an'ny AirTag amin'ny fomba tsikelikely | iPhone News
Tony Cortes | 28/04/2022 22:46 | Fitaovana IPhone
Androany alakamisy, vaovao version firmware AirTag vaovao. Toy ny mahazatra ao amin'ny orinasa dia tsy manana vaovao momba ny vaovao entin'ity fanavaozana ity izahay. Miaraka amin'ny AirTags, mistery ny fanavaozana rehetra.
Ary ny zavatra hafa "mistery" dia ny fomba hanatanterahana ny fanavaozana. amin'ny fomba mitongilana. manomboka anio izany ho an'ny vondrona sasany, ary hifarana amin'ny 13 mey, miaraka amin'ny fanavaozana 100% amin'ny fitaovana. Koa aza manahy, ary hihena ny AirTags-nao isaky ny...
Ora vitsy lasa izay, Apple dia namoaka fanavaozana firmware vaovao ho an'ny AirTag. Ka ato anatin'ny andro vitsivitsy dia handeha amin'ny fananana ny kinova 1.0.291 ankehitriny mankany amin'ny vaovao 1.0.301. Ary tandremo fa hoy aho hoe "ao anatin'ny andro vitsivitsy".
Toy ny mahazatra amin'ny fanavaozana ny Apple trackers, ireo avy amin'ny Cupertino dia tsy mampahafantatra anay ny vaovao izay ampidiriny ao amin'ny fanamarihany mahazatra momba ny fanavaozana, toy ny amin'ny ankamaroan'ny fitaovan'ny orinasa. Ka indray mandeha avela tsy ho fantatra izay fanatsarana ampidiriny ity kinova vaovao ity.
Ary amin'ity indray mitoraka ity, ny fanavaozana dia hatao tsikelikely ho an'ny fitaovana rehetra eto an-tany. AppleSWUpdates manondro ny kaontinao Twitter fa ny firmware vaovao dia hahatratra iray isan-jaton'ny mpampiasa voalohany anio. Hahatratra 3 isan-jaton'ny mpampiasa izany amin'ny 25 Mey ary 9 isan-jato amin'ny 13 Mey. Tokony ho feno ny fandefasana ny sampana rehetra miasa amin'ny XNUMX mey.
Midika izany fa raha efa ao amin'ny version 1.0.301 ny mpanara-dia anao dia efa mampiasa ny rindrambaiko farany avy amin'ny Apple izy ireo. Raha tsy izany dia aza kivy farafahatarany amin'ny 13 mey dia tokony ho efa manana azy ireo ianao.
Indraindray i Apple dia mampiasa ity rafitra fanavaozam-baovao ity amin'ny fomba mitongilana. Tsy manao izany, mainka fa mba tsy hahavoky ny mpizara azy, satria ny haben'ny firmware AirTags dia mahatsikaiky raha ampitahaina amin'ny fanavaozana mahazatra amin'ny iPhone na iPad, ary tsy miresaka momba ny Mac intsony isika.
Miaraka amin'ity fomba ity fanavaozana tsikelikely, Apple dia afaka mihetsika haingana ary manosika fanavaozana misy olana alohan'ny hahatongavany amin'ny fiara rehetra. Noho izany dia hanam-paharetana isika, ary miandry andro vitsivitsy hahitana raha nisy fanavaozana ny mpanara-dia anay.
Ahoana no hijerena raha nohavaozina ny AirTag anay
Toy izany koa no mitranga amin'ny AirPods, Apple dia tsy mamela anao "hanery" ny fitaovanao hanavao. Apetraho eo akaikin'ny iPhone-nao fotsiny izany, ary miandry ny fanavaozana ho azy.
Ny azonao atao dia ny mijery raha efa nanao izany izy, amin'ny fomba tena tsotra. Sokafy ny app Find My amin'ny iPhone, iPad, na Mac-nao. Fidio ny tabilao misy soratra hoe "zavatra". Fidio ny Air Tag momba izay tianao hojerena antsipiriany bebe kokoa. Tsindrio ny kisary batterie eo ambanin'ny anaran'ny AirTag ary hiseho ny nomeraon-serasera sy ny kinova firmware. Izany hoe, ho hitanao ny firmware 1.0.301 vaovao alohan'ny 13 May. Amin'izao fotoana izao dia tsy misy fanavaozana ny ahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Apple dia manavao ny firmware AirTag amin'ny sehatra mihodina
Aqara dia manavao ny sensor mihetsika miaraka amin'ny fahaleovan-tena sy fahatsapana bebe kokoa
Ny iOS 15.5 beta dia manakana ny fahatsiarovana ny sary nalaina tany amin'ny toerana "saropady".